Kutheni uYesu wayethetha ngemizekeliso Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Kutheni uYesu ethetha ngemizekeliso. UYesu wathetha ngemizekeliso chaza iinyaniso ezintsonkothileyo ngendlela elula. Wayebasebenzisa rhoqo ukubuza nokuphendula imibuzo. Ukusetyenziswa kwe imizekeliso yayiyindlela eqhelekileyo yokufundisa ngexesha likaYesu.
Kwimizekeliso yakhe, uYesu wasebenzisa amanani aqondwa ngabaphulaphuli bakhe: ukutya, umtshato, ubudlelwane phakathi koyise nonyana, njalo njalo kunye nezinye izihloko. La mabali alula achaziwe Kunzima ukuqonda izinto eziyinyani njenge usindiso kunye noBukumkani bukaThixo. Ke ngoko, noyena mntu ulula unokuyiqonda igospile. Ngemizekeliso yakhe, uYesu Wenza indlela yosindiso ukuba ifikeleleke kubo bonke.
Kutheni le nto uYesu ethetha ngemizekeliso: yintoni unobangela?
Emva koko siza kuveza ezona zinto zibangela kwakutheni ukuze uYesu athethe ngemizekeliso. Ngale nto siza kucaphula iivesi zeBhayibhile eziza kusinceda ukuxhasa inkcazo.
UYesu wathetha ngemizekeliso ukuzalisekisa isiprofeto (Ndumiso 78: 2). Imizekeliso yakhe ityhila iinyaniso ezinzulu neemfihlakalo zakudala (Mateyu 13: 34-35).
Ndiya kuwuvula umlomo wam ngomzekeliso; Ndiza kuthetha amaqhina amandulo.
I-78 Psalms: 2
Ezi ndawo zonke uYesu wazithetha ngemizekeliso ebantwini; wayengathethi kubo kungengamzekeliso;
ukuze kuzaliseke okwathethwayo ngomprofeti, esithi,
Ndiya kuwuvula umlomo wam ngomzekeliso;
Ndiya kubhengeza izinto ezazifihliwe kwasekusekweni kwehlabathi.
UMateyu 13: 34-35
Imizekeliso emininzi kaYesu yayifuna ingcaciso ukuze iqonde intsingiselo yayo. U-Yesu uxelele isihlwele imizekeliso, kodwa wanika ingcaciso kubafundi bakhe (UMarko 4: 33-34). Wenza oku kuba abantu abaninzi esihlweleni babengenamdla wokumlandela. Babefuna nje ukubona imimangaliso okanye ukuhlekisa ngoYesu.
Wayesithi, ngemizekeliso emininzi uYesu, awafundise ilizwi, ngokokuqonda kwabo. Wayengathethi nto kubo ngaphandle kokusebenzisa imizekeliso. Kodwa xa wayeyedwa nabafundi bakhe, wayebacacisela yonke into.
UMarko 4: 33-34
Aba bantu babenzima kwaye bengayiqondi inyaniso, nokuba kungumzekeliso olula (UMateyu 13: 14-15). UYesu wanika ingcaciso kuphela kwabo bafuna ngokwenene ukufunda. Abo babengakulungelanga ukulandela uYesu basilela ukuqonda. Ngabafundi bokwenene kuphela ababenokufikelela enyanisweni.
Sizaliseka kubo isiprofeto sikaIsaya:
»“ Nokuba bade baziva, abayi kuqonda;
noko bakubonayo abayi kukuqonda.
Ngenxa yokuba intliziyo yesi sizwana ilukhuni;
Iindlebe zabo zenziwe buthuntu,
namehlo abo avalekile.
Kungenjalo bebeya kubona ngamehlo,
beva ngeendlebe zabo,
bebeya kuqonda ngentliziyo
UMateyu 13: 14-15
U-Yesu ucacisela abafundi bakhe ukuba abo bamaziyo uThixo bayakufumana ulwazi olungaphezulu, kodwa abo bangamaziyo uThixo bayakuphulukana kwanolwazi oluncinci abanalo (UMateyu 13: 11-12). Imizekeliso kaYesu yayilula, kodwa abo babengamthandi uYesu babengayiqondi. NguThixo ebahlazisa abo babezicingela ukuba bazizilumko kodwa bamgatya uYesu (Eyesi-1 kwabaseKorinte 1: 20-21).
Nikunikiwe ukuba nizazi iimfihlo ze UBukumkani bamazulu; kodwa hayi bona. Onako ke uya kunikwa, abe nako ngokugqithiseleyo; Ongenako ke, uya kuhluthwa kwanoko anako.
UMateyu 13: 11-12
Siphi na ke isilumko? Uphi umphengululi? Uphi na sobulumko ngeli xesha? UThixo akabutshintshanga na ubulumko beli hlabathi bubudenge? Kuba uThixo, kuyilo lobulumko, wakunika oko el mundo engamazi ngobulumko babantu, wabona kufanelekile ukuba asindise, ngobuyatha bokushumayela, abo bakholwayo.
Eyesi-1 kwabaseKorinte 1: 20-21
Siyathemba ukuba eli nqaku lifutshane liyakunceda uqonde isizathu kwakutheni ukuze uYesu athethe ngemizekeliso. Ukuba ngoku ufuna ukwazi ifayile ye- Isizathu sokuba uYesu eze emhlabeni, qhubeka ukhangela fumanisa.online kwaye ufundise ulwazi lweBhayibhile.